म्याराडोनाले किन कुटे प्रेमिकालाई
एजेन्सी बिहीबार, फागुन ५, २०७३ 24410 पटक पढिएको
म्याड्रिडः रियल म्याड्रिडविरुद्ध बुधबार भएको युरोपियन च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत प्रिक्वार्टरफाइनलको पहिलो लेगको खेलमा नापोलीको पाहुना बनेर म्याड्रिड पुगेका म्याराडोनाले होटेलमा प्रेमिकालाई पिटेका छन् । म्याराडोना आफ्नी प्रेमिका रोसियो ओलिभालाई लिएर बुधबार राति भएको खेल हेर्न मंगलबार नै म्याड्रिड पुगेका थिए । नापोलीका अध्यक्ष युरेलियो डी लउरेन्टिसको विशेष निमन्त्रणामा म्याराडोना रियलविरुद्धको खेलमा नापोलीका खेलाडीको हौसला बढाउन म्याड्रिड पुगेका थिए ।
नापोलीले म्याराडोना र उनकी प्रेमिका ओलिभालाई उत्तरी म्याड्रिडको युरोस्टार सुइट्समा राखेको थियो । मंगलबार अपराह्न ओलिभाले म्याराडोनासँग होटेलको स्पामा सँगै रमाइलो गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर, बुधबार बिहान ओलिभाले होटेलको रिसेप्सनमा म्याराडोनाले आफूलाई पिटेको भन्दै फोन गरेपछि प्रहरी पुगेको थियो । यद्यपि प्रहरीसामु झगडा परेको स्वीकार गरे पनि दुवैले रिपोर्ट गर्न नचाहेको भन्दै प्रहरी फर्किएको थियो ।
स्पेनी मेडियाले जनाएअनुसार म्याराडोनाले त्यसअघि म्याड्रिडमै पत्रकारमाथि पनि आक्रमण गरेका थिए । कोपका पत्रकार एञ्जेल गार्सियालाई अन्तर्वार्ता लिने प्रयास गर्दा म्याराडोनाले उनीमाथि आक्रमण गरेको जनाइएको छ । सन् १९८० देखि ९० को समयमा आफ्ना स्टार खेलाडी रहेका म्याराडोनालाई नापोलीले सम्मानस्वरूप महत्ववपूर्ण खेलका लागि लिएर गएको थियो ।
म्याराडोनाले नापोलीबाट रियल म्याड्रिडविरुद्ध पनि खेलेका थिए । सन् १९८७ मा युरोपियन कपअन्तर्गत भएको खेलमा रियल समग्रमा ३-१ ले विजयी बनेको थियो । यस पटक नापोलीलाई समर्थन गर्न १० हजार समर्थन म्याड्रिड पुगेका छन्, जुन क्लको इतिहासमै देश बाहिरको प्रतिस्पर्धामा यत्ति धेरै समर्थक पुगेको पहिलो अवसर हो ।
प्रधानमन्त्री आज भारत जाँदै 741
नेपाल-भारत वार्ता : पञ्चेश्वर असफल 4052
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 45093
संशोधनमा दुई तिहाइका लागि ४८ मत पुगेन 4647
फौजदारी संहितामा फड्को 669
टुलु-टुलु, निष्ठुरीको स्वतन्त्र प्रेस ! 1317
बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रचण्डले दिए देउवालाई चेक 841
सर्पको टोकइबाट एकको मृत्यु 224
अध्यागमनको फन्दामा नक्कली खेलाडी 2464
'गोडा गुम्यो, गैंडा नगुमोस्' 1484
फेसबुकका सिइओ मार्क जुगरवर्क फेरी बुवा बन्‍दै 8020